Sajhasabal.com | Home६ हजार दिएर १० लाखको तमसुक बनाइदिएपछि...
६ हजार दिएर १० लाखको तमसुक बनाइदिएपछि...
प्रेम सुनार । भदौ २५, बुटवल । राणा कालिन र पञ्चायत कालिन फटाहहरुले गरिव र सोझा साझी माथी गर्ने कर्तुत अझै पनि समाजमा यदाकदा यथावत रहेको समाचार प्राप्त भएको छ । हामीलाई प्राप्त कागजात र सुचना अनुसार प्युठानका एक ब्यक्तिले गुल्मीका एक अनपढ बृद्धलाई जम्मा ६ हजार रुपैयाँ दिएर १० लाखको तमसुक बनाई उनको घर जग्गाको बन्दकी पास गरेका छन ।
प्युठानको साविक वादीकोट गाविस वडा नम्वर ७ का रेकमबहादुर खत्री क्षेत्रीले गुल्मीको मदानेगाउँपालिका वडा नम्वर ६ , घिउपानीका ७८ बर्षिय बृद्ध ज्ञानबहादुर घर्ति क्षेत्रीलाई भदौ ५ गते जिल्ला मालपोत कार्यालय गुल्मीमा यस्तो जालसादी गरेका हुन ।
रेकमबहादुरलाई उक्त जालसादी गर्न सघाउने मुख्य ब्यक्तिहरु गुल्मी कै पुर्कोटदहका चिन्तबहादुर कुँवर र ताकमान थापा रहेका छन । बृद्धकी श्रीमतिको मृत्यु भएकोले उनि छोराहरु संग छुट्टिएर एक्लै बस्दै आएका थिए । दुई छोराहरु मध्ये जान्ने बुझ्ने एक छोरा बिदेश थिए ।
यस्तो अवस्थाको सोझा बृद्धहरुलाई आफन्त पर्ने चिन्ताबहादुर र ताकमानले तिमीलाई रेकमबहादुरले जिवनभर पाल्ने , स्यार सुसार र विरामी परे उपचार गरी दिने लगायतको प्रलोभन देखाउँदै छोराहरुलाई अंशविहिन गराउने प्रपञ्ज रचेका थिए ।
उनिहरु तमसुकमा साँछी मात्रै बसेनन, घर्तिलाई तम्घास ल्याउन र जग्गा पास गराउने कार्यमा समेत सक्रिय भएका थिए । उनिहरु दुई जना संग सम्पर्क राख्दा आफुहरुले उनिहरुको लेनदेन भएको आफुहरुलाई थाह नभएको , भनाईको आधारमा मात्र हस्ताक्षर गरेको बताए ।
बृद्धलाई फकाई फुलाई अपहरणको शैलीमा चोरबाटो प्रयोग गरी तम्घास ल्याई होटलमा राखेर मासु रक्सी खुवाउँदै थप प्रफुल्लीत पारेर १० लाख रुपैयाँको तमसुकमा औठा छाप लगाउन लगाई १० बर्ष भित्र उक्त रकम बुझाउन नसके जग्गा पचक हुने गरी र. नं.२०४ को दृष्टि पास गराईएको थियो ।
१० लाख तपाईले बुझेकै हो भनेर मालपोत अधृकृतले सोध्धा हो भन्नु शब्द बोल्न लगाई मालपोत अधिकृत खुपबहादुर केसीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाईएको थियो । मालपोत अधिकृत केसी भन्छन–‘ मैले सोध्धा ति बृद्धले उक्त रकम ऋण लिएको हो भन्दा , हो भने पछि हस्ताक्षर गरेको हुँ । ’
यस सम्वन्ध उनै रेकमबहादुर खत्री संग सम्पर्क राख्दा उनले घर्तिलाई २०६९ सालमा ४ लाख दिएको, २०७३ सालमा ३ लाख दिएको र २०७४ सालमा १ लाख ५० हजार दिएको र १ लाख ५० हजार ब्याज जोड्दा १० लाख लिनु पर्ने तमसुक गरिएको बताए ।
ति बृद्धले आफुलाई यस अघि खत्रीले कुनै पैसा नदिएको , तम्घास आएर ६ हजार रुपैयाँ दिएको र बाँकी रकम आबश्यकता अनुसार बेला बेलामा आफुलाई दिने गरी फकाए पछि आफुले हस्ताक्षर गर्न मानेको बताए । उनले उक्त जग्गा पास गर्ने कुरामा आफुलाई थाह नभएको बताएका छन ।
उनले बन्दकी लिएको जग्गा सालझण्डी ढोरपाटन सडक छेउँको महंङ्गो मुल्य पर्ने स्थानमा छ । अरु बाँकी जग्गा खर ख¥यान मात्रै रहेको उनका जेठा छोरा कृष्ण र कान्छा पदम घर्तिले बताए । हामीहरु अब सुकुम्वासी बन्दै छौं, अरु जग्गा हाम्रो नाममा छैन । हाम्रो अंश बेचि दिए बाबाुले, यस बाट बचाई दिनु प¥यो , उनिहरु दुबै भाईले भनेका छन ।
गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ ः विप्लव माओवादी
रातौरात ति बृद्धलाई जिल्ला मालपोतमा लगेर उक्त जग्गा पास गराएको थाह पाउन साथ विदेशमा रहेका उनका छोरा . विदेशबाट घर अए । उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका स्थानिय नेता वसन्त गैरे संग सम्पर्क राखे । त्यतिले पनि नपुगेर सो पार्टीका जिल्ला पार्टी सेक्रेटरी खिम खड्कालाई भेट्न तम्घास आए ।
बृद्धमा पनि लालच देखियोः सिडियो
यस सम्वन्धमा गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्याल संग सम्पर्क राख्दा उनले जग्गा अर्कोलाई दिनुमा ति बृद्धमा पनि लालच देखिएको प्रतिकृया दिए । आफुले पैसा पाउने कुरामा ति बृद्ध प्रलोभित भएको देखिन्छ उनले भने –‘ ति मतियार दुई जनालाई बोलाएर निगरानीमा बस्न लगाईएको छ , खास दोषि खत्रीलाई खोजी कार्य जारी छ । यस घटना प्रति प्रशासन गम्भीर छ । छिट्टै सवै जनालाई सम्पर्कमा ल्याएर छलफल गराईने ।